Ukunyuka kwamanyathelo omntu ngesinyathelo: ifoto, ividiyo. Ukuguqulwa kwamanxeba - iteknoloji yokwenza ekhaya
Ingcamango edlulileyo yokuba amadoda okwenyaniso kufuneka abe mncinci ngakumbi kuneminyama. Indoda ephumelelayo yanamhlanje ayikhangeli nje ingqondo yakhe, i-erudition kunye ne-charm, kodwa nayo ibonakala kakuhle. Ayikho indima yokugqibela inikwe ezandleni. Ukuba awufuni amaqabane oshishino ukuba ajonge i-burrs kunye neenkomfa zeembhokhwe xa usayina isivumelwano, ixesha lokuba ufunde indlela yokwenza umquba.
Ukuqhawula ngamadoda kubandakanya ukunakekelwa ngoncedo olubanzi. Izipikili kufuneka zifakwe ngokucophelela, i-burrs isuswe, i-cuticle cut or pushed aside. Ukongezelela, kuya kuthatha ulondolozo lwesikhumba sezandla: shenxisa ngoncedo lokutshiza, ukuphucula nokunyusa isikhumba esomileyo.
"Ukugubungela okanye kungenakwenzeka, kwaye unokwenza ukupholisa ukunika ukukhanya okukhazimulayo?" Lo mbuzo unzima kakhulu. Njengomthetho, ukugubungela i-hue varnish engenambala okanye iyenzileyo ixazululwa ngabambalwa, kodwa ngeze. Iimpahla zikhangeleke kakuhle kwaye ziphilile kwaye zihlala kunjalo, nokuba nantoni na enikwenzayo.
Umzimba wesilisa unempawu zawo, ezingayi kululeka xa zenza ekhaya.
Ngenxa yobunzima obuphezulu bekeratin kwizesondo ezinamandla, izipikili zinamandla, kodwa ngenxa yokunyamekela okungafanelekanga, zinokuphela. Njalo ubambe i-blade yerhasi ngokungqongqo kwiplati enye ukucoca zonke iindawo.
Ingqwalasela ngokukodwa ngexesha le nkqubo kufuneka linikezelwe ngesikhumba ejikeleze isikhonkwane. Ikhawuleza ngokukhawuleza, ngoko kufuneka iqhutywe.
I-Burrs nayo iqhelekile. Kumele zisuswe, ngelixa zingalimazi ulusu.
Ulusu lwezandla kumadoda ludla kwaye luqhekeza ngokuphindaphindiweyo kunabesifazane. Isisombululo esihle kakhulu sokwenza umuthi kunye nenkqubo yokunyamekela kweso sikhumba sezandla. I-Paraffinotherapy - eyona nto ikhethekileyo: umphumo ubonakala emva kokuqala, ayifuni ixesha elininzi, inkqubo ayibizi kakhulu kwaye kulula ukuqhuba ekhaya.
Ukuqhayisa umuthi, ukusetyenziswa kwetheknoloji
I-manicure edibeneyo ixazulula zonke iingxaki esizibhengeze ngaphambili. Ukuze siqhube oko siya kuyidinga:
ibhagi ekhethekileyo yezipikili;
iyunithi yokupumba (ukhetho).
Ngaphambi kokuba uqale inkqubo, indoda kufuneka ilumkise ngokubhekiselele kwimvakalelo engathandekiyo.
Siqala ngokususa ubude obongezelelweyo. Kufuneka uyenze oku kunye nesikhephe somntu okanye iipelisi ezikhethekileyo. Izipikili zesilisa akufanele zibe ngaphezu kwe-1 mm.
Sinika izipikili ngendlela. Siyibambe iqela lomboniso ngokugqithiseleyo, sihamba kuphela kwicala elinye. Khumbula ukuba ukuma komda wokukhulula kufuneka kuphinda umlo wesipoti somnwe.
Ukuxhotywe ngumbhobho, sihambisa i-cuticle kwisiseko sekhopi. Iimfudu kufuneka zibe lula kwaye zicoceke, akufanele utyhoboze nayiphi na indlela.
Sahlula izandla. Kwibhati kufuneka ifakwe ityuwa ekhethekileyo. Gcina ibhulashi emanzini ixesha elide, oku kuqinisekisa ukulungiswa okupheleleyo kwesikhumba esiqeshwe.
Ukukhupha ngokukhawuleza umnwe omnye, ususe amanzi amaninzi kwaye uqale ukusika i-cuticle. Hambisa amancinane kwaye rhoqo. Ungabi nentshiseko kakhulu, ngaphandle koko unobungozi wokusika indoda esesethukile. Zonke ezinye i-cuticle ziza kususwa ngokukhawuleza ngentonga ye-orange.
Nika ingqalelo kubaxhasi bee-side. Emva kokuhlamba, isikhumba esinekristatini sinqunyulwa kalula. Emva kokucoca umzimba, isitya singacetyiswa ukuze sikhanyise ngakumbi, kodwa kungekhona bonke abameli besondo esomeleleyo abavumelana nalo. Faka isicelo seoli ekhethekileyo malunga nebhedi lesilumko, kwaye ugcoba izandla zakho ngekhilimu.
I-European manicure ekhaya
Uninzi lwa madoda lukhetha ukhenketho olungapheliyo. Iingcali zengqondo zithi inqubo efana neyokuzongcola ngesondo esomeleleyo kulula ukugqiba (amantombazana, thabatha inqaku).
Kwi-European manicure cuticle ayinqunyulwa, ngokufanelekileyo ukuvakalelwa kunye nomngcipheko wokulimaza ulusu okanye umbhede wesikhonkwane kunye necatshulwa engekho. Kwaye izandla zibukeka zihle kwaye zilungele ixesha elide. Ekhaya, kulula ukwenza ngaphezu kweklasiki. Isitoreji sinezixhobo kunye nezimonyo, ezifana ne:
ukuhlamba ngesandla kunye netyuwa (ngokuzithandela)
isixhobo esikhethekileyo sokunciphisa nokususa i-cuticles (ungakhetha ukwenziwa kweempawu zobugcisa, umzekelo, i-CND okanye intando yesininzi: uSally Hansen, Orly, njl.).
Siqala ukuhlengahlengiswa kwinqanaba lomdabu: ukususa ubude obuninzi nokunikezela izipikili.
Isinyathelo esilandelayo sisebenzisa indlela yokususa i-cuticle. Kufuneka ilale kwindawo elukhulu. Landela imiyalelo ebhokisini! Nceda uqaphele ukuba ezininzi zezi mveliso ziqulethe iziqhamo ze-acid, ngoko ke ukuba ungafuni ukulimaza isikhumba sakho somnwe okanye ukutshiswa - ungawudluli.
Emva kokuba yonke iminwe iqhutywe, kufuneka ihlaziye imizuzu emihlanu ebhahleni ngamanzi afudumele kunye ne-spoonful of salt.
Ukuqala unyango lweendleko zeempiki kwiminwe encinane: njengomthetho, ulusu luba lukhuni kubo. I-cuticle isele ithambile kwaye ilula ukuhlula kwibhedi lepiki. Qaphela ngokucophelela i-peel ngenduku ye-orange, kwaye usule i-asele nge-cotton ecocekileyo.
Amagqabini okugqibela aya kuphosa i-plate kunye nokusebenzisa ioli yondlo.
Ukuba umntu akazange enze i-manicure ixesha elide okanye isikhumba sakhe siqhelile, uzama ukusombulula ingxaki ngesityhuthi esishushu. Ekhaya, i-lotion ekhethekileyo isetyenziselwa ukutshiswa ku-50-60 °, kwaye isetyenziswe kwesikhumba sezandla. Iiglavu ze-Polyethylene zifakwa phezulu, kwaye emva koko - i-terry mittens. Ukuvakalelwa okuthabisayo, kunye neziphumo ezilungileyo ziqinisekisiwe!
I-European manicure, video
Indlela yokwenza izikhonkwane zobuxoki
Imilinganiselo emitsha yobungqina besifazane: amaqabunga amnandi kunye neenki
Abantwana abaneziphene ekuphuculeni ngokomzimba kunye nokuziphatha komntu
Iimfihlelo zesikhumba sokuhlambulula izinto ezintsha ngePayot Les Démaquillantes
Ukhuseleko lwabantwana entwasahlobo kwisitalato
Indlela yokusela i-absinthe